Ary sao dia ianao no olana? | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← L’allotélie supposée de la démocratie justifie-t-elle une régression politique?
Pourquoi reforester a du sens? →
Ary sao dia ianao no olana?
Publié le 25 septembre 2016 par andrianjorar
Sarotra amintsika matetika ny manaiky fahadisoana indrindra moa fa avy amin’olona tsy fantatra ny fanakianana. Mba jereo nefa ity indray mitoraka ity fa toa hafahafa toy ny sahafa ary sarotra disoana.
Tsy misy tsy manaiky isika mpanaraka politika sy toe-karena fa tsy mahafeno ny fampanantenana nataony ny tarik’i Hery Vavao, ary azo lazaina mihitsy aza hoe tsy mamely ry leirony. Ireo miteny izany nefa dia miteny koa hoe tsy mety raha ahongana izany izy ireo fa aleo miandry fifidianana satria na ireo mangataka ny fialàna ireo eo koa aza dia tsy azo antoka velively hoe ahavita tsara kokoa.
Maro isika no mihevitra fa marina ireo fehin-kevitra roa ireo satria ny tantara dia nanamarina hatrany fa mitombina izany hevitra izany.
Indro nefa ny olana :
– niaraha-nahita fa ny fifidianana dia tsy vaha-olana velively amin’ny fanatsaràna ny fitantanana ny firenena, na i Ragidro na i Ravaolavo no lany eo, na misy na tsy misy hala-bato. Marina izany eto Gasikara, fa mbola marina ihany izany na any Gabon, na any Frantsa, na any Rwanda. Ny antony dia satria tsy misy hifandraisana na kely aza ny fahaizana mangala-bato na ny fandambolamboana ny mpifidy, sy ny fahaizana mitantana.
– Diso tanteraka ny filazàna hoe ny fifidianana no fampiarana ny atao hoe demokrasia. Ohatran’ny hoe asaina mifidy ny anana atao fangaron-daoka ianao mba hampandeha ny fiara mitatitra anao andeha hiasa rahampitso maraina. Izany anefa no tantanrain’ny tandrefana sy ireo afrikanina andevony alefa mamolaka antsika. Ny fahafahan’ny vahoaka, izany hoe izaho sy ianao, manara-maso sy manasazy na manaiky ny ataon’ny mpitondra no atao hoe demokrasia. 56 taona izao Gasikara no nahaleo tena indray, tsy nisy na ora iray aza nandritra izay fotoana izay ka hoe ny fahefàna nanananao dia nahafahanao nanaramaso ny fampiasana volam-panjakàna na nahafahanao nitsara ny tsy mety nataon’ny mpitondra.
Noho izany dia averiko fa :
– tsy misy hifandraisana NA KELY AZA ny demokrasia sy ny fifidianana.
– tsy misy hifandraisana ihany koa NA KELY AZA ny fifantenana ny olona mahay mitondra fanjakàna sy ny fifidianana.
Tsy misy olombelona arisaina na iray aza eto ambonin’ny tany hafaka milaza fa misy diso ireo zavatra rehetra nambarako ireo.
Iza nefa ny olona manaiky tantaraina ireo lainga rehetra ireo? Ianao izay mamaky ity lahateny ity. Ny fanekenao ireo lainga rehetra ireo dia famporisihina ireo mpangala-bato sy mpangalatra volam-panjakàna hifandrombaka haka fitondràna sy hanoy izany.
Ianao izany no olana tsy mampandroso ity firenena ity ary ny tsy fandraisanao ny andraikitra maha olom-pirenena anao no mampietry ity firenena ity fa tsy ireo mpanao politika izay manararaotra fotsiny ny fahalemenao.
Mila tsiny tompoko nilaza ny marina.
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué ala-bato, demokrasia, fifidianana, Olom-pirenena. Ajoutez ce permalien à vos favoris.
6 commentaires pour Ary sao dia ianao no olana?
nirina razafinimanana dit :
26 septembre 2016 à 9:24
« Ny fahafahan’ny vahoaka, izany hoe izaho sy ianao, manara-maso sy manasazy na manaiky ny ataon’ny mpitondra no atao hoe demokrasia. »
Marina tanteraka io voalazanao io. Ary mino aho fa raha omena fahefana hanara-maso sy hanasazy ny vahoaka dia tsy maintsy miova ihany ity firenena ity. Maninona moa raha itarina ny fampiasana ny dina fa tsy amin’ny halatra omby ihany ? Efa manomboka hita ihany izany amin’ny tranga sasany miseho (fitsarambahoaka ohatra) fa tsara raha atao lalàna mihitsy mba ho aro fanina.
1 mars 2017 à 4:23
Raha azoko tsara izany dia tsy tokony hifidy isika? Ahoana izany no isafidianana izay filoham-panjakana?
2 mars 2017 à 12:35
Raha firenena tsara tanàna no tanjona dia tsy fifidianana no vahaolana fa ny fanaraha-maso ny mpitondra sy ny fanjakàna.
Izay hifidiananao ny mpitondra avy eo mety avokoa
18 avril 2017 à 6:28
Mahazo mifidy izay tianao ianao ka. Fa aza mamita-tena ka manantena hoe izany no hitondra demokrasia.
Ohatran’ny fisotroana thb io, tsy ny fisotroana azy akory no mahatsara ny fiarahanao amin’ny namanao.
Sely Randria dit :
17 avril 2017 à 8:04
Ary ny fanonganana angaha vaha olana ? Sa manaraka ny hetaheta marina avy a@ ny vahoaka? Sa ny hetahetanao mampirisika ihay?
Tsy mpomba io Fitondrana io ny tena ary tsy manana antony hanohanana io fa mahatsiaro tena (réaliste) fotsiny ihany.
18 avril 2017 à 6:25
Tsy misy miteny anie hoe vahaolana ny fanonganana e. Milaza fotsiny aho hoe mamita-tena sy mamitaka ny hafa izay mamerina toy ny boloky hoe ny fifidianana no vahaolana sy hitarika mankany amin’ny demokrasia.